Isiqephu se-A42. Indlu yobuciko yaseDowntown Bohemia
Hlola idolobha kanye nefa lalo elidala nelisha kusukela efulethini lami elithokomele elinokuthinta okuncane okuhle nendawo ekahle (imizuzu emi-3 ukusuka esiteshini esimaphakathi kakhulu - isiteshi saseSerdika). Ngemva kokubuka indawo yosuku, yenza ama-popcorn bese uhlala phansi phambi kweprojektha ukuze uthole ubusuku obuzolile.
Siyakwamukela ku-innovative, kodwa ngesikhathi esifanayo efulethini elithokomele endaweni ethule yedolobha lase-Sofia - lisendlini enezitezi ezintathu elungiswe ngokuphelele. Iphansi futhi azikho izitebhisi zokufika kuyo. Le ndawo ihlanganisa indawo yokuhlala enosofa oyimojuli entofontofo ongayihlela njengoba uzizwa ukhululekile ukuhlala 😊, itafula lokudlela elisebenziseka kalula futhi elisetshenziselwa isiteshi somsebenzi/selaptop; ikhoneni lekhishi elinakho konke ongase ukudinge ukuze ulungise ukudla okufudumele noma wenze nje ikhofi/itiye, ifriji ivulekile ukuze kugcinwe kusha imikhiqizo nezithako eziningi ngendlela othanda ngayo; kukhona ikhabethe lesiShayina (lapho ungathola khona i-TV kanye ne-Bluetooth projector uma uthanda ukubukela amafilimu akho e-Netflix kumakhalekhukhwini : ). Kukhona ikamelo lokulala elihlukile elinombhede wenkosi kanye nekhabethe lapho ungagcina khona imithwalo yakho. Indlu yokugezela inkulu uma kuqhathaniswa nayo yonke impahla edingekayo (nomshini wokuwasha).
Isitezi esisodwa udadewethuzala unendawo yobuciko, lapho wamukelekile khona ukuthi ubukeke (ungahle uthande uhlobo lwakhe lomgwaqo bese unquma ukuthenga okuthile : ) noma ungafuna nje ukubheka ukuthi ukuklanywa kwe izingubo zenziwe - futhi akukho nkinga ngokuqhamuka.
Ezinye izitezi ezimbili kuhlala mina nomfowethu (uhlala esitezi sesithathu ngakho uhlale ekhona ukuze akusize nganoma yini) noma ezinye izivakashi ezithandekayo uma ngingekho, okuyinto eyenzekayo okungenani engxenyeni yonyaka.
Ngaphandle nje uzothola igceke langasese elinendawo yokupaka yamahhala. Ikakhulukazi phakathi nezinyanga ezifudumele, ungakwazi ukujabulela inkomishi yekhofi noma itiye ngaphandle; sisasebenza kwezobuciko egcekeni lakithi 😊
4.89(35 okushiwo abanye)
Old city centre of Sofia
Izivakashi zingangithola noma nini
Izilimi: English, Deutsch, Русский, Español